एनआरएनएको वर्तमान नेतृत्वमाथि सुनियोजित षड्यन्त्र गरियोः महासचिव डा. शर्मा – News Portal of Global Nepali
मध्यपूर्वका एनआरएनए प्रतिनिधिहरुलाई भर्चुअल रुपमा सम्बोधन गर्दै डा. शर्माले कोरोनाकालमा संस्थाको परीक्षा भएको र त्यसमा वर्तमान नेतृत्व उच्च अंकसहित पास भएको बताए । आफूहरु संघप्रति सधै इमान्दार रहेको जनाउँदै डा। शर्माले कुनै आर्थिक वा अन्य गलत गतिविधिमा संलग्न भएको भए प्रमाणित गर्न चुनौति दिए । ‘हामी यहीँ छौ । एनआरएनए छाडेपनि हामी हाम्रो ठेगाना दिन तयार छौं,’ उनले चुनौति दिंदै भने, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ वा कहाँ गएर छानबीन गराउने हो गराए हुन्छ ।’